Halkee Ayay Iskala Qaadeen Ilhaan Cumar Iyo Madaxweyne Donald Trump?? – somalilandtoday.com
Halkee Ayay Iskala Qaadeen Ilhaan Cumar Iyo Madaxweyne Donald Trump??
(SLT-Washington)-Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa ugu baaqay Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah, kana tirsan aqalka Kongreska Mareykanka, inay iscasisho, kadib markii ereyo Yuhuud naceyb ah ay ku qortay barteeda Twiter-ka.
Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in xildhibanaada aqalka Kongreska ee taageersan Israa’iil ay dhaqaale ka helaan kooxaha taageera Yuhuuda, arrintaasi oo sababtay in Gudoomiyaha Kongreska, Nancy Pelosi oo sheegtay in Ilhaan looga fadhiyo inay raaligeli ka bixiso hadalkaasi.
Waxaa kale oo uu sheegay in raali gelintii ay bixisay Ilhaan Cumar ay tahay mid daciif ah, oo wxaaa uu intaa raaciyay in hadalka kasoo yeeray Ilhaan uu yahay mid ay si weyn u aaminsan tahay.
Haddaba halkee iskala qaadeen Ilhaan Cumar iyo Trump?
Xiligii uu madaxweyne Trump ku jiray ololaha doorashada, waxaa aad loo xusuusta hadal uu ka yiri Soomaalida ku nool Mareykanka oo ahaa in falal argagixiso ay kusoo kordhiyen Minnesota, oo haddii la doorto uu ka hortagi doono qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriinta Soomaalida.
Waxaa kale oo aad loo xusuusta hadal caan baxay oo ay tiri Ilhaan oo aha in dadka Minnesota aysan soo dhaweynin qaxootiga oo keliya, balse sidoo kale ay u diraan Washington, oo ay ula jeedday doorashadeedii maadaamma ay qaxooti ahaan dalka ku soo gashay.
Markii la dhaariyay lhaan Cumar aya waxay farta ku fiiqday arrimo ay kamid yihiin taageerada Trump uu siiyo dowladda Sacuudiga ee dagaalka ka wada dalka Yemen, waxaana ay ku baaqday in Trump uu joojiyo taageerada uu siiyo xulafada Sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka ka wada dalka Yemen.
Tan iyo markii la soo doortay Ilhaan Cumar, waxay fursad kasta oo soo marta u adeegsatay inay weerarto siyaasadaha Donald Trump, waxaana tusaale loo soo qaadan karaa markii ay ka hadashay hakadkii ku yimid adeegyada dowladda kadib markii madaxweyne Trump uu aqalka Kongreska ka dalbaday dhaqaale lagu dhisayo derbiga xadka Mareykanka iyo Mexico, si uu u ansixiyo dhaqaalaha lagu kala wadayo adeegyada dowladda.
Ilhaan ayaa arrintaasi si weyn uga soo horjeedsatay, waxayna billowday olole looga hortagayo qorshaha madaxweyne Trump.
Sidoo kale Ilhaan ayaa kasoo horjeedsatay qaabka madaxweyne Donald Trump uu ula macaamilayo dowladda Venazuela, waxaana ay sheegtay in cunaqabateynta dhaqaale ee Trump ay tahay mid uu doonayo in uu uga faaideysto isbadel dhanka hogaanka ah oo ka dhaca dalka Venazuela, oo waxaa ay ka digtay tallaabo milateri oo ka dhan ah dowladda madaxweyne Nicholas Maduro.
Ilhaan Cumar waxa kale oo ay soo jeedisay in canshuur dhan boqolkiiba 70 laga qaado maal-qabeennada Mareykanka, maadaama madaxweyne Trump la aaminsan yahay in uu ka shaqeeyo danaha ganacsatada waaweyn ee Mareykanka.
Ilhaan waxaa kale oo la rumaysan yahay inay aad uga soo horjeedo qaabka Isra’iil ay ula dhaqanto Falastiin, waxaana mar ay twitter-keedu kusoo qortay in Illaahay uu dadka tuso dhibaatooyinka Isra’iil ay ku heyso Qaza.
Mar ay la hadleesay telefishenka MSNBC, Ilhaan waxay aad ugu dheeraatay dabeecadaha Trump, iyadoona sheegtay in marka la eego cadeymaha isa soo taraya ay muujineyso in madaxweyne Trump uu ku lug leeyahay falal dembiyeedyo.
Ficillada qaar ee Ilhaan Cumar ayaa sidoo kale ka careysiiyay xulafada madaxweyne Trump oo Sacuudiga uu ka mid yahay.
Warbaahinta Dowladda Sacuudiga ayaa weerar dhanka saxaafadda ahi ku qaadeen Ilhaan Cumar, maadaama ay kasoo horjeedsatay siyaasadaha madaxweyne Trump.
Bishii Disembar ee sannadkii tegay, telefishinka laga leedahay dalka Sacuudiga ee Al-Carabiya ayaa wuxuu baahiyey muuqaal uu ku sheegay in Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib oo Iyana katirsan aqalka Kongreska inay qeyb ka ahaayeen isbahaysi u dhexeeya xisbiga Dimuqraaddiga iyo kooxaha islaamiga ah, ayna doonayeen iney la wareegaan maamulka aqalka Koongareeska.
Waxaa kale oo jirta aragti aad u xoog badan oo ah in dalalka Sacuudiga, Israel iyo Mareykanka oo waxyaabo badan isku aragti ka ah aysan la dhacsaneyn qaabka Ilhaan ay uga soo horjeedo siyaasadaha Trump, arrintan Ilhaan Cumar ay ku dhaqaaqday na ay fursad u siineyso in madaxweyne Trump uu cadaadis ku saaro inay Ilhan iscasisho ama ay isaga baxdo guddiga arrimaha dibadda ee Kongreska madaama arrimahaasi oo dhanna ay taabanayaan siyaasadaha arrimaha dibadda.